भायानेट जडान अब ४८ घण्टाभित्रै
काठमाण्डौ । भायानेटको इन्टरनेट जडान गर्न ग्राहकले अनुरोध गरेको ४८ घण्टा भित्र इन्टरनेट जडान गर्ने सुविधा थप गरेर सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । अब नयाँ ग्राहकहरुले आफ्नो घर वा अफिसमा भायानेट जडान गर्न चाहेमा ४८ घण्टा भित्रै उनीहरुको घरमा भायानेटको इन्टरनेट चल्न थाल्नेछ । देशको विभिन्न भागमा लकडाउन भइरहेको यो महामारीको बेलामा पनि...
टिकटकद्वारा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाण्डौ । भिडियो सेयररिङ एप टिकटकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइट डान्ससँग कुनै पनि अमेरिकी कारोबारमाथि रोक लगाएको थियो। बाइट डान्स लिमिटेडले अमेरिकाको यो आरोपलाई नकार्दै टिकटक अमेरिकाको सुरक्षाका लागि...
लकडाउनले विद्युतीय कारोबारमा उछाल, अनलाइनयुग सुरु भएकै हो ?
काठमाण्डौ । कोभिड १९ संक्रमणका कारण मानिसहरु भौतिक दूरीमा रहनुपर्ने भएपछि विद्युतीय कारोबारमा भने उछालको अवस्था देखिएको छ । सुरक्षित कारोबार मानिएको विद्युतीय कारोबारमा सर्वसाधारणहरुको अचाक्ली आकर्षण देखिएको हो । कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लगाएपछिको केही महिनामा विद्युतीय कारोबारका...
विश्वभर गुगलका जीमेल, युट्युब र गुगल ड्राइभ सेवामा समस्या, समाधानको कोसिस जारी
काठमाण्डौ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टेक कम्पनीमध्ये एउटा गुगलको आज बिहीबार थुप्रै सेवाहरु डाउन भएका छन्। आज सबैभन्दा धेरै समस्या जीमेल, गुगल ड्राइभ र युट्युबमा देखिएको छ। यसका कारण प्रयोगकर्ताहरुलाई निकै समस्या भएको छ। जीमेल र गुगल ड्राइभमा फाइल अट्याच नै भइरहेको छैन। युट्युबमा भने भिडियो अपलोड गर्न समस्या भइरहेको छ। अहिले...
एसईईका विद्यार्थीलाई टेलिकमको निःशुल्क सिम,मासिक ३ हजार एमबी डाटा, ३५० मिनेट टकटाइम र १५० वटा एसएमएसको सुविधा
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमले विगत वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि एसईईका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यार्थी अफर प्याक सहितको सिम नेपाल टेलिकमका देशभर रहेका काउन्टरहरुबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । कुनै विद्यार्थीसँग पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमको सिम छ भने त्यही सिममा अफर उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत छ...
सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सामान खरिद गरी सेलपेबाट भुक्तान गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्रा. लि. को सेलपे सेवाले सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखी सेलपे सेल्सबेरी अफर ल्याएको छ । यो अफर आगामी कातिक ३० गते सम्म लागू हुनेछ । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरको २३ ओटा आउटलेटमा...
सय दिनमा हजार भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने अभियानमा फोनपे
काठमाण्डौ । नेपाल भेन्टिलेटर बैंकले सय दिनमा एक हजार भेन्टिलेटर सरकारलाई उपलब्ध गराउने अभियानमा पmोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडले साथ दिएको छ । यस अभियान अन्तर्गत अबदेखि फोन पे नेटवर्कबाट अन्तरबैंक कारोबार गर्दा प्रतिकारोबार रू एक छुट्याइने छ । यसरी छुट्याइएको रकम नेपाल भेन्टिलेटर बैंकलाई उपलब्ध गराइनेछ । भेन्टिलेटर बैंकले सय दिनमा...
एनटिसीको आयमा गिरावट, यस्ता छन् कारण
काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमको कुल सेवा बापतको आयमा संकुचन आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमाससम्मको कुल सेवा बापत टेलिकमले ३४ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २१ हजार ५९५ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ३६ अर्ब ८६ करोड ७५ लाख ८३ हजार २२१ रुपैयाँ रहेको थियो...
एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पुरस्कारबाट सम्मानित
काठमाण्डौ । सफ्टवेयरको क्षेत्रमा अग्रणी कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापार पुरस्कारबाट सम्मानित भएको छ । यो पुरस्कार बेलायतको अग्रणी बिजनेस पत्रिका एपीएसीले दक्षिण एशियाका व्यवसायहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जना गरेको प्रभावका आधारमा हरेक वर्ष प्रदान गर्ने गर्दछ । यो कुनैपनि नेपाली कम्पनीले पहिलो पटक जितेको...
एप्पल प्लेस्टोरमा माइक्रोसफ्ट, गुगल र फेसबुकका गेमिङ एप प्रतिबन्धित
काठमाण्डौ । विश्वका दिग्गज टेक कम्पनीहरुबीच यतिबेला गेमिङ एप्सलाई लिएर शीतयुद्धको सुरुआत भएको छ। वास्तवमा एप्पलले आइफोन तथा आइप्याडको प्लेस्टोरमा माइक्रोसफ्ट, गुगल र फेसबुकका चर्चित गेमिङ एपहरुलाई स्थान दिन अस्वीकार गरेको छ। अर्थात् यी सबै कम्पनीको गेमिङ एप्सहरु एप स्टोर बिना प्रयोगकर्तासम्म पुग्न सक्ने छैनन्। माइक्रोसफ्टको गेम...
काठमाण्डौ । बहराईनमा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त मनि ट्रान्सफर बहराईन फाइनान्सिङ कम्पनी र इसेवा मनि ट्रान्सफरबीच रेमिट्यान्स सेवा सुरु भएको छ । यो सेवा सुरु भएसँगै बहराईनमा रहेका नेपालीहरुले बीएफसीको ५५ वटा शाखाहरु साथै BFC Bahrain App बाट नगदमा, कुनै पनि बैंक खातामा र इसेवा वालेटमा पैसा पठाउन सक्नेछन् । नगदमा पठाइएको पैसा सिधै...
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ भिडियो सेयरिङ एप टिकटक र वीच्याटमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले शुक्रबार टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्स र वीच्याट चलाउने टेन्सेन्टमाथि ४५ दिनपछि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि...